Binary စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ကုန်သွယ်လူကြိုက်များပိုင်ဆိုင်မှုများ | ထရေးဒင်းပိုင်ဆိုင်မှုများဘာတွေလဲ - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
binary ကုန်သွယ်က၎င်း၏ရိုးရှင်းများနှင့်ရရှိနိုင်ကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဒီတော့ပေါ်ပြူလာဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့, binary ကုန်သွယ်နေတဲ့ကုန်သည်ဖြစ်လာစေရန်နှင့်ငွေရှာချင်ပါတယ်တဲ့သူကိုလူတိုင်းအဘို့ဖြစ်၏။ အတော်များများကပွဲစားများနှင့်ပလက်ဖောင်းအားလုံးကုန်သည်များများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှုများပူဇော်ရာ, ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒွိကုန်သွယ်၏အဓိကခုနှစ်တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။
တိုင်း binary options များပလက်ဖောင်းကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ဟာအားလုံးအတူတူပင်အမျိုးအစားများကိုလှည့်ပတ် revolve ။ တစ်ခုခုလူတိုင်းအတွက်ရှိပါတယ် - သင်ရုံသင်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်ပါတယ်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတွေ့ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ရသောသငျနှငျ့အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြ၏။ ရဲ့ binary options များပလက်ဖောင်းပူဇော်ရသောလူကြိုက်အများဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုမှာကွညျ့ကွစို့!
Beginners များအတွက် Start ကို Cryptocurrency ထရေးဒင်းဖို့လှောင်ပြောင်ရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်
ငွေကြေးကုန်သွယ်သင်တို့ရှိသမျှသည် binary options များပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ရှာဖွေနိုင်သည်ထားတဲ့ကုန်သွယ်၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကုန်သွယ်နေတဲ့ကုန်သည်အဖြစ်သင်ငွေကြေးအားလုံးအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, သူတို့ရဲ့လဲလှယ်မှုနှုန်းနေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ပလက်ဖောင်းပေါ် မူတည်. သင်ထိုကဲ့သို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ / EUR အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးကိုအားလုံးအတွက်ပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်နိုငျသညျ, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / GBP, EUR / GBP, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY စသည်တို့ကိုအသုံးပြုနေသည်
ပိုင်ဆိုင်မှု၏ဤအမျိုးအစားနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. နိုင်ငံခြားသုံးငွေ, Forex သို့မဟုတ် FX သဘောကိုသိရ၏။ ကုန်သွယ်ဤအမျိုးအစားနှင့်အတူ, သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်အခြားနှင့်တသားတငွေကြေး၏တန်ဖိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ကြသည်, ဒါမှမဟုတ်တဦးတည်းငွေကြေးပေးထားသောအချိန်ဘောင်အတွင်းကအခြားတစ်ခုထက်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လျှင်တစ်နည်းအတွက်, သင်ခန့်မှန်းနေကြသည်ဥပမာ - သင်ထင်နေကြတယ် အဆိုပါအမေရိကန်ဒေါ်လာ / EUR ငွေကြေးကို pair တစုံအကြောင်းခန့်မှန်းစေပါ။ အဆိုပါ EUR အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တက်သွားပါလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်ပတ်လည်အခြားလမ်းဖြစ်လိမ့်မည် - သင်သည်အဘယ်သို့ထင်သနည်း ဒါကြောင့်နားလည်ရန်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကငွေကြေးလဲလှယ်လူကြိုက်အများဆုံးကုန်သွယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အများအပြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာထိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်နှင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြစဉ်ကတည်းကစတော့ရှယ်ယာနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်အသစ်တစ်ခုအရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ထို binary စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေတကယ်အမြတ်အစွန်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာဖွေသောအတော်လေးသစ်ကိုအရာဖြစ်၏။ စတော့ရှယ်ယာဟာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုနှစ်သက်သောအမျိုးအစားများမှာကတည်းကသို့သော်သင်ပထမဦးဆုံး, စတော့ရှယ်ယာမည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
binary ပွဲစားများကိုသင်၏စျေးနှုန်းကိုခန့်မှန်းနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောစတော့ရှယ်ယာကိုဆက်ကပ်။ လူကြိုက်အများဆုံးစတော့ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုများထဲတွင် Google ကစတော့ရှယ်ယာ, Apple ကစတော့ရှယ်ယာ, ကိုကာကိုလာစတော့ရှယ်ယာ, Deutsche ဘဏ်စတော့ရှယ်ယာစသည်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးဆောင်များနှင့်သင်အသုံးပြုနေသောနေသောပလက်ဖောင်းပေါ် မူတည်. ကွဲပြားထိတ်အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုဖြစ်ကြသည်။
အခြားအစဉ်ပဲလူကြိုက်အများဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတချို့ကကမ်းလှမ်းမှုကို, လေးနက်ပွဲစားများကိုပင်ကုန်သည်၏တည်နေရာနှင့်ပွဲစားတည်ရှိသည်ဖြစ်သောတိုင်းပြည်ပေါ် မူတည်. ဒေသခံထိတ်အပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆက်ကပ်။
အဆိုပါပိုမိုနှစ်သက် binary option ကို type ကိုအသုံးပြုခြင်း, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထိတ်အမျိုးအစားထဲကအချို့သောပိုင်ဆိုင်မှုအဘို့မိမိတို့အကျပ်အတည်းများကစေနိုင်သည်။
ကုန်စည်ရုံ binary options များကုန်သွယ်ကမ္ဘာကြီးဝင်ရောက်နေကြသည်သောသူတို့အဘို့ပြီးပြည့်စုံသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သူတို့ကတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနိမ့်အန္တရာယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း, သင်၏ဂိမ်းကိုတက်နင်းမတိုင်မီအတွေ့အကြုံကိုရရှိမှုများအတွက်ကောင်းစွာသင်အစေခံနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကုန်စည်များမှရေပန်းအစားဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုရွှေ, ငွေ, ရေနံ, ကော်ဖီ, etc များမှာ
ဒါကြောင့်အများအပြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်နှင့်အညီကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကကုန်စည်ဒိုင်ကုန်သွယ်တစ်ဦးအနိမ့်အန္တရာယ်ကုန်သွယ်စဉ်းစားသည်။ ကမ်ဘာပျေါမှာလက်ရှိစီးပွားရေးပြည်နယ်စဉ်းစား, ရွှေစည်းမျဉ်းဖြစ်ပွားမှုအများစု၌, ကုန်စည်၏တန်ဖိုးပေးထားသောအချိန်ဘောင်အတွင်းသို့တက်သွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ သို့သျောလညျး, တကနိမ့်အန္တရာယ်ကုန်သွယ်ပင်သော်လည်း, အဲဒါကိုအန္တရာယ်-အခမဲ့ကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး! စိတ်ထဲအတွက်သိမ်းဆည်းထားပါ!
ညွှန်းကိန်းနှင့်အတူထရေးဒင်းကုန်သွယ်၏အခက်ခဲဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်စဉ်းစားသည်။ အဘယ်ကြောင့်? Indicator များသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး, သို့သော်သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ unnoticeable ဟန်သေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်အများကြီးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Indicator စျေးနှုန်းများတက်တစ်ခုလုံးကိုအချိန်ဆင်းသွားနိုင်ပါတယ် - ကခက်ခဲသက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်တွင်မိမိတို့၏တန်ဖိုးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အောင်, တန်ဖိုးကိုတကယ်သေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲရှိသည်။
binary options များပွဲစားများနှင့်ပလက်ဖောင်းဟာညွှန်းကိန်းများ၏အမျိုးမျိုးသင်တို့ကိုရွေးကောက်သထားသောပွဲစားပေါ်တွင်မူတည်သည်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို DAX-30, FTSE-100, Dow Jones, S & P 500 အဖြစ်ကုန်သည်များမှကွဲပြားခြားနားသောညွှန်းကိန်း, ကိုဆက်ကပ်။ လေးနက်သောဒွိပွဲစားများထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုအမေရိကန်, ဗြိတိန်, ဂျာမနီ, ဂျပန်, ပြင်သစ်, အဖြစ်နိုင်ငံအများအပြားမှညွှန်းကိန်းပူဇော်
binary ပွဲစားများက၎င်း၏ဖောက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဤလေးမျိုးအမျိုးအစားပူဇော်ပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးအစား၏ကျယ်ပြန့်သငျနှငျ့အတူအလုပ်လုပ်နေကြသည့်ပွဲစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ငွေကြေးနှင့် Commodities နေဆဲအတူကုန်သွယ်မှုအတော်လေးလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်ရန်စဉ်းစားနေကြသည်နေစဉ်, အန္တရာယ်အမြဲပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုတစ်စက္ကန့်တစ်တံစို့အတွက်ဖြစ်စေလမ်းသွားနိုင်ပါတယ်ကတည်းကအခြားတစ်ဖက်တွင်, စတော့ရှယ်ယာများနှင့် Indicator, riskier ဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။ သင်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်ဖြစ်ကြလျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းပြီးသားဒီအသိတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကလယ်ကွင်းအသစ်ဖြစ်ကြပါလျှင်, စတင်ချိန် မှစ. ကြီးတွေသွားခြင်းအားဖြင့်သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ပါကြပါဘူး။ သင်နှင့်အတူအဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုရွေးချယ်ပါနှင့်အတွေ့အကြုံများရရှိစေရန်။ ကံကောင်းပါစေ!
CFD (ခြားနားချက်အဘို့စာချုပ်) ကုန်သွယ်ကုန်သည်များအပေါ်ထင်ကြေးပေးနိုင်ပါတယ် ...
, မှတ်ပုံတင်ရန်အတည်ပြုရန်နှင့်သင့်အောင်သင်မည်သို့ဖေါ်ပြခြင်းပြီးနောက် ...
ExpertOption2အကောင့်အမျိုးအစားတွေကိုတစ်သရုပ်ပြအကောင့်များနှင့်တစ်ဦးကမ်းလှမ်း ...
Tags: binary options များအဘို့အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှု, ဒွိပိုင်ဆိုင်မှု, ထို binary options များ, ထို binary options များပွဲစားများ, ထို binary options များကုန်သွယ်, ဘဏ္ဍာရေးပိုင်ဆိုင်မှု binary options များ, ကုန်သွယ်ပိုင်ဆိုင်မှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်, ဒွိပိုင်ဆိုင်မှုဘာတွေလုပ်နေလဲ, အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုဘာတွေလုပ်နေလဲ